အကောင်းဆုံးသောစျေးနှုန်းဖြင့်ငါးအစာတောင့်ပြုလုပ်သောစက်ကိုရောင်းရန် floating pellet စက်ကိုရောင်းချသည်
ပါဝါ:11kw + 0.4kw သုံးအဆင့်
စွမ်းရည်:60~ 80kg / h
Floating pellet ကြိတ်သည်ခါးပတ် drive ဖြင့်အဆင့်မြင့် single screw extruder အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်လူကြိုက်များမှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံခဲ့သည်. feedstocks ၏ extrusion ပိုးသတ်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားမြင့်မားအောက်မှာရင့်ကျက်၏ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ပါသည်. ယေဘုယျအားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားနှင့်စိုစွတ်သောအမျိုးအစားတို့ပါဝင်သည်. ဒီစက်ကထုတ်လုပ်တဲ့အတောင့်တင်းသည်, ရေခံနိုင်ရည်နှင့် damp ကိုခံနိုင်ရည်.
1.impeller feeder တပ်ဆင်ထားသည်, အဆင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ယူနီဖောင်းအစာကျွေးခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုအတွက်သံလိုက်စက်ပစ္စည်း.
4.အချောတောင့်သည်ရေပေါ်ဆက်ထိန်းထားနိုင်သည် 3-15 ရေညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲနာရီ.
5.သင်ရွေးချယ်လိုသောခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားနှင့်စိုစွတ်သောငါးအစာစက်။ စိုစွတ်သောစက်သည်ရေနွေးငွေ့ပြုလုပ်ရန်အတွက်ရေနွေးငွေ့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးရေနွေးငွေ့ကိုအေးစက်စေပြီးကုန်ကြမ်းများကိုကြိုတင်မှည့်နိုင်သည်။. တူညီသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုတွင်ထုတ်လုပ်မှုသည်ခြောက်သွေ့သောစက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်. ဒါကြောင့်စိုစွတ်သောစက်သည်အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်.
floating လုံးတောင့်စက် အလုပ်လုပ်အခြေခံ
Extrusion ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်, အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအစာကျွေးကုန်ကြမ်းအစာကျွေး (ထိုကဲ့သို့သောရောစပ်အဖြစ်, အပူ, ဖြတ်တောက်ခြင်း, စသည်တို့) သေခြင်းမှတဆင့်စီးဆင်း, ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းသို့မဟုတ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဓာတ်ငွေ့ပါစေ. စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံမုန့်စိမ်းအဖြစ်အချည်းနှီးသောပြည်နယ်မှ feedstocks လုပ်ခြင်း, ရရှိလာတဲ့ငါးပိသတ္တုပြားထဲမှာအပေါက်မှတဆင့် extruded ဖြစ်ပါတယ်. အပေါက်များ၏အချင်းဟာတောင့်များ၏အချင်းကိုသတ်မှတ်သည်, အရာအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားကနေအထိနိုင်ပါတယ်.
☆ဆန်ဖုန်မှုန့်: အကြောင်းအရာပါ 10-14% ဗီတာမင် B1 ပါ ၀ င်သည်, ခ, B6 နှင့်အင်ဇိုင်း၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်.
☆မုန်ညင်းကိတ်မုန့်: အများဆုံးရောမွှေပါ 40% ငါးအစာကျွေးခြင်းအတွက်ကိတ်မုန့်၏. ဒါပေမယ့်ပိုပြီးခြောက်သွေ့တဲ့ကိတ်မုန့်ကိုမသုံးပါ 20%. မုန်ညင်းကိတ်မုန့်ပါဝင်သည် 30-32% ပရိုတိန်း. ဒါဟာအစမြင့်မားတဲ့အဆီနှုန်းပါရှိသည်.
☆ဂျုံဖွဲ: ဖိုင်ဘာပါဝင်သည်, ငါးရောဂါအမျိုးမျိုးကိုထိန်းချုပ်သည်.
☆ပြောင်းဖူး: ပရိုတိန်းပါဝင်သည်, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, အဆီ, ဗီတာမင်အေနှင့်အီး.
☆လဲမှို့မျိုးစေ့များ: အကြောင်းအရာပါ 54% ပရိုတိန်း. ၎င်းသည်ဖြည့်စွက်ငါးအစာအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်.
☆ငါးအမှုန့်: ငါးမှအလွယ်တကူစာချေ. Fishmeal အကြောင်းပါရှိသည် 55-60% ပရိုတိန်း.
☆အရိုးမှုန့်: ငါးအရိုးတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အလွန်လိုအပ်သော. အရိုးဖုန်မှုန့်များတွင်ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်အချိုးသည်2: 1.
☆အတွင်းပိုင်း : အလွန်သင့်လျော်သောနှင့်စံပြအစာကျွေးခြင်း. အဲဒီထဲမှာပါ 52% ပရိုတိန်း.
Floating Pellet Mill ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
မော်ဒယ် စွမ်းရည် (t / h) စွမ်းအား (kw) အစာကျွေးခြင်းအာဏာ ( kw) ဝက်အူမီတာ ( မီလီမီတာ) စွမ်းအင်ဖြတ်တောက် ( kw)
VTGP120 0.5-0.7 55 1.1 20120 2.2
VTGP200 1.5-2.0 132 1.5 5195 3.0